Su'aalaha La Weydiiyo - Shanghai May Macluumaadka Macluumaadka Maqaarka Co, Ltd.
Ma waxaad tahay shirkad ganacsi oo gaar ah ama shirkad leh warshad u gaar ah?
Waxaan nahay soo saaraha mashiinada quruxda xirfadeed ee dhabta ah, oo leh kooxda wax soo saarka, kooxda R & D, xoogga iibka iyo kooxda adeegga iibka kadib.
Warshadeenu waxay ku taalaa Suzhou, magaalo horumar deg deg ah leh oo naanaysta ah "beerta dambe ee Shanghai". Haddii waqtigaaga la heli karo, si diiran ayaa lagugu soo dhaweynayaa inaad u timaado Shiinaha si aad u soo booqato warshaddeena!
Ma haysaa wax damaanad ah?
Haa, waan haysannaa. Hal sano oo dammaanad qaad ah oo ku saabsan mashiinka martida loo yahay ayaa la siiyaa. Saddex bilood oo damaanad beddelaad lacag la’aan ah oo loogu talagalay gacmaha, madaxyada daaweynta, iyo qaybaha.
Kawaran haddii wax dhibaato ah oo tayo leh ay dhacaan inta lagu jiro mudada dammaanadda?
Kooxdayada tignoolajiyada xirfadeed ee taageerta waxay soo bandhigi kartaa barnaamij casriyeyn bilaash ah 3 ~ 6month adeegyadaaga waqtiga ku habboon. Waxaad kaheli kartaa caawimaadda aad ubaahantahay waqtigeeda taleefan, kamarada webka, wada sheekaysiga internetka (wadahadalka Google, Facebook, Skype). Fadlan nala soo xiriir mar haddii mashiinku wax dhibaato ah leeyahay. Adeegga ugu fiican ayaa la bixin doonaa.
Waa maxay shahaadada aad haysaa?
Dhamaan mashiinadeena waxay leeyihiin shahaadada CE oo hubineysa tayada iyo badbaadada. Mashiinadeenu waxay ku hoos jiraan maarayn tayo leh oo adag si loo hubiyo tayada ugu sareysa.
Maxaan sameeyaa haddii aanan aqoon sida loo isticmaalo mishiinka?
Waxaan haynaa fiidiyow hawlgal iyo buug adeegsi oo tixraac ah.
Waa maxay xirmada?
Xirmo xumbo, xirmo sanduuqa Aluminium, ama macaamiisha looga baahan yahay.
Sidee ku saabsan rarka?
Ma daabici karnaa calaamadeyda alaabta?
Haa, waxaan taageernaa OEM. Ku dar magacaaga dukaanka, Logo
Luqadee ayuu barnaamijku taageeraa?
Waxaan taageernaa luqado badan
Ma habeyn karnaa nidaamka software-ka?
Haa, waxaan bixinnaa adeegga OEM & ODM